Faah faahin:- Bam gacmeed lagu weeraray guri uu degan yahay Nabadoon Sheekh Muuse – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Bam gacmeed lagu weeraray guri uu degan yahay Nabadoon Sheekh Muuse
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Bam gacmeed habeenkii xalay lagu weeraray guri uu magaalada Jowhar ka degan yahay Nabadoon Sheekh Muuse oo ka mid ah odayaasha sida weyn looga yaqaano gobolka Sh/dhexe.
Abaarihii 8:30 xalay ayaa Bam noociisu yahay kuwa gacanta laga tuuro lagu weeraray guriga Nabadoon Sheekh Muuse, waxaana weerarkaasi ku dhintay mid ka mid ah illaalada guriga nabadoonka, halka sidoo kale uu dhaawac soo gaaray ruux kale oo isla illaalada ka tirsan.
Kooxihii weerarka ku qaaday guriga Nabadoon Sheekh Muuse ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana goobtaasi markii dambe soo gaaray ciidamada nabad-sugidda magaalada Jowhar oo halkaasi baaritaano ka sameeyay.
Nabadoon Sheekh Muuse ayaa ka mid ah odayaasha wax ka dhisay maamulka Hirshabeele ee fadhigiisa yahay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyada Bam gacmeedka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay si aad ah ugu soo badanayay magaalada Jowhar, iyadoo maalmo ka hor ay aheyd markii xarunta madaxtooyadda maamulka Hirshabeele lagu tuuray Bam gacmeed ceynkaan oo kale ah.